अत्यन्तै लाभदायक र औषधीय गुडले युक्त फल, टिमुरका फाइदा - ज्ञानविज्ञान
अत्यन्तै लाभदायक र औषधीय गुडले युक्त फल, टिमुरका फाइदा
नेपाली टिमुर पछिल्लो समय विश्व बजारमै लोकपि्रय बन्दै गएको छ । नेपालको प्राय पश्चिमी भूभागमा उत्पादन हुने टिमुर हरेक वर्ष विश्वभर निर्यात हुदै आएको छ । यो बहुउपयोगी छ । टिमुरको दाना स-साना राता ४ देखि ५ मिलिमिटर व्यासका हुन्छन् । यसको स्वाद तीतो, पिरो र जिब्रो पर्पराउने खालको हुन्छन् । टिमुरलाई मसला र औषधीको रुपमा प्रयोग गरिन्छ ।
टिमुर नेपालमा पाइने एक किसिमको फल हो । मीठो स्वाद र बासना हुने टिमुर लोकप्रिय नेपाली मसलाको रूपमा परिचित छ । उच्च पहाडी क्षेत्रमा यात्रा गर्दा लेक लाग्छ । लेक लाग्नु भनेको अक्सिनको कमी र चिसोको चाप थेग्न नसक्नु हो । यस्तो अवस्थामा टिमुर खान दिइन्छ । हुन त टिमुर अरुबेला पनि खानेकुरामा मिसाएर खाइन्छ । तर, जाडोमा भने यसले काइदाको काम गर्छ ।
खासगरी वाह्य तापमानसँग शरीरको सन्तुलन मिलाउन यसले काम गर्छ । साथै टिमुरले रोगप्रतिरोधात्मक क्षता पनि बढाउँछ । टिमुरको अचार वा कुनै नुडल्समा टिमुर मिसाइने गरिन्छ, जसले त्यसको स्वाद दोब्बर बढाउँछ । स्वादका लागि मात्र होइन, ओखतीको रुपमा पनि यसले काम गर्छ ।
टिमुरको प्रयोगले दाँत दुख्ने समस्यामा राहत मिल्छ । आयुर्वेदिकका अनुसार टिमुरले वायुशमन गर्ने, दाँत दुखेको निको पार्ने, उर्जा प्रदान गर्ने, जरो, अजिर्ण, हैजाआदी समस्यालाई निको पार्ने काम गर्छ ।
आँखाको दृष्टि कम भएका मानिसले नियमित रुपमा टिमुरको प्रयोग गर्दा लाभदायक हुन्छ ।
न्युन रक्तचाप भएका व्याक्तिलाई पनि टिमुरले निकै फाइदा पुर्‍याउने गर्छ ।
गाउँ घरमा अझै पनि हात खुट्टा मर्किएमा टाउको दुखेमा र पिनास भएको बेला टिमुरको तेलले मसाज गरि निको गराइन्छ । टिमुलको फलको बोक्राबाट तेल तयार पारिन्छ । यस्तो तेल सुगन्धित हुने गर्छ ।
टिमुरमा फस्पोरसको मात्रा पनि हुने भएकाले हाडको लागि पनि निकै उपयोगी हुन्छ ।
कम भोक लाग्ने समस्या छ भने पनि टिमुरको प्रयोग गर्दा हुन्छ । यसले भोक जगाउने काम गर्छ ।
टिमुरले क्यान्सरको सम्भावनालाई पनि कैयौँ गुणा कम गर्ने काम गर्छ । त्यस्तै, यसले पेटमा लाग्ने बिभिन्न किरा तथा जुगाहरुलाई मार्नको लागि पनि सहयोग पुर्‍याउँछ ।
नेपालमा विशेष गरि टिमुरलाई अचारको रुपमा प्रयोग गरिन्छ । टिमुरलाई दानाकै रुपमा वा धुलो वनाएर प्रयोग गरिन्छ । यो एक प्रमुख मसला हो ।
यसलाई छोइला, मासु र विभिन्न प्रकारका तरकारीलाई स्वादिष्ट बनाउनमा पनि प्रयोग गरिन्छ । यसलाई थुप्रै परिकारमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । चाइनिज भान्सामा त टिमुर अनिवार्य नै हुन्छ । थाइल्याण्ड तथा युरोपतिर पनि यसको प्रयोग अत्याधिक हुन्छ ।
टिमुरको फललाई प्रशोधन गरि दन्तमञ्जन, सावुन, अत्तरको रुपमा रुपमा पनि प्रयोग गरिदै गरिन्छ ।
टिमुर श्रृंगार समाग्री निर्माणमा पनि प्रयोग गने गर्छ । सुगन्धको लागि प्रशोधन गरि टिमुरको प्रयोग गरिन्छ ।
टिमुरको औषधीय प्रयोग
१. पेट सम्बन्धी रोगमा
यो विशेष गरी पाचनक्रिया कमजोर हुने विमारको सफल औषधि हो । यसले मन्दाग्नि, अपच, आऊ र यी समस्याको कारणले पेटमा हुने वायुशूलमा उत्तम औषधिको काम गर्दछ । पेटमा हुने क्रिमि (किरा) को संक्रमणलाई पनि यसले धेरै हदसम्म ठिक गर्छ ।
संकुचक तत्त्वको कारण यसमा ग्राही विशेषता विद्यमान छ । जसले यो लगभग सबै प्रकारका अतिसार (खाना नपच्ने, दिशामा आऊँ मिश्रित पखाला जस्तो हुने) मा प्रयोगीय औषध द्रव्य सिद्ध भएको छ । यसको सेवनले यकृत (लिभर) बलियो हुने र जठराग्नि (पाचनक्रिया) मा सुधार आउने तथा पाचनक्रिया आदिको कारणबाट अनुहारमा आएको शोथ (फुल्ने समस्या) ठिक हुने बताइएको छ ।
यसको सेवनले भोक बढाउँछ । समान्यतया मन्दाग्निमा यसको प्रयोग समान्य तरिकाबाट गरिएपनि पित्तज मन्दाग्निमा मिश्री काँढासँग र पित्तातिसारमा बेलको शर्वतसँग सेवन गर्न उत्तम हुने आयुर्वेदको निर्देशन छ ।
२. हैजामा टिमुरको प्रयोग
हैजाको संक्रमण चलेको समयमा यो निकै उपयोगी वस्तु हो । कथंकदाचित हैजाको विमारीको उपचारको लागि अस्पताल तथा चिकित्सकको व्यवस्था मिल्न गाह्रो पर्यो भने यसको फल वा जराको बोक्रालाई पानीमा पकाएर बनाएको क्वाथ वा काँचो बोक्रालाई थिचेर निकालिएको रस बिमारीको उमेरलाई हेरी मात्रा मिलाएर सेवन गराउँदा लाभ हुन्छ ।
स्वास्थ्योपचार निकायको पौँच नपुगेको स्थानहरुमा हुनसक्ने हैजाको संक्रमण आदिको लागि यो निकै उपयोगी सिद्ध हुनसक्ने छ । तर यसको विषयमा सम्बन्धित निकायले समयमै परीक्षण अभ्यास गर्न जरुरी हुनसक्छ ।
३. ज्वरो र कफमा
ज्वरो एवम् कफको विमारमा शरीरमा पसिना उत्सर्जन गरी शरीरलाई हल्का बनाउन यसको पातको स्वरस वा जराको बोक्राको रसलाई पकाएर बनाइएको क्वाथको सेवन गर्न आयुर्वेदले मार्गदर्शन गरेको छ । यसमा विद्यमान उत्तेजक तत्त्वको प्रभावले शरीरमा पसिना निकाल्न मद्दत गर्दछ र ज्वरो एवम् कफको समस्यामा सहज हुन्छ ।
४. गलाको शोथमा
टिमुरको ताजापातलाई पिसेर चामलको पिठोसँग मिलाएर गरम गर्ने र गलामा बाँध्नाले गलाको सूजन हट्दछ ।
टिमुरको सेवनले घाऊ खटिरामा पनि फाइदा पुर्याउने बताइएको छ । टिमुरको फल खुवाउने, यसको चूर्णलाई घाऊमा भुरभुराउने (छर्कने) र यसको बोक्रा (जराको बोक्रा)को काँढाले व्रण अर्थात घाऊ धुनाले निकै लाभ हुन्छ ।
६. गठिया वातमा
जडिबुटी शास्त्रको अनुसार गठिया वातमा पनि यसको जराको बोक्रालाई पानीमा पकाएर पिलाउनाले राम्रो फाइदा गर्छ ।
७. दाँतको लागि
यसको हाँगा बिँगा वा काँडालाई पानीमा पकाएर त्यसको पानीले कुल्ला गर्नाले दाँतको पीडा हट्ने र हाँगाले दाँत मल्नाले दाँत निर्मल हुने मत रहेको छ । यसर्थमा यो दन्त मञ्जनको राम्रो विकल्प पनि हुनसक्छ ।
८. अन्य स्वास्थ्य समस्यामा
मन–मस्तिष्क, पागलपन, रगत सम्बन्धित समस्या आदिमा पनि यो ग्रहणीय वस्तु रहेको जडीबुटी शास्त्रहरुले मुक्त कण्ठले चर्चा गरेका छन् । यसलाई पौष्टिक पनि मानिएको छ । वात, अर्बुद, उदररोग, आँखा, कान र ओंठको रोग, शिरको बोझ, दम, प्लिहा, पिसासम्बन्धी रोग आदिमा यसको औषधीय प्रयोग गर्न सकिने जडीबुटी ग्रन्थमा चर्चा छ ।
मात्रा : सामान्यतया वयस्क व्यक्तिको लागि यसको फलको मात्रा २ देखि ५ रत्ती र जराको बोक्रा १ देखि २ तोलासम्मलाई लिन सकिन्छ । जडीबुटीबाट औषधोपचार गर्दा कतिपय द्रव्यहरु जो सामान्यतया दैनिक भोजनादिमा पनि प्रयोग गरिन्छ ।
तिनीहरुलाई खाद्यपदार्थको रुपमा प्रयोग गर्दा औषधिको काम नगरेर भोजनको काम गर्नपनि सक्ने हुनाले उपचारको लागि प्रयोग गर्दा सकभर औषधीय तरिकाबाट प्रयोग गर्नुपर्छ जसले बढी फाइदा दिनसकोस ।
नेपाली समाजमा एउटा रमाइलो प्रसंग छ । जब कोही फलफूल बोकेर हिँडिरहेका हुन्छन् ।
छिमेकीले सोध्छन्, ‘होइन, कोहि बिरामी छ ?’
छिमेकीले किनपनि यस्तो आशंका गरे भने तपाईंले फलफूल बोक्नुभएको छ । अर्थात हामी घरमा कोही बिरामी परे फलफूल ख्वाउँछौ । कोही आफन्त, साथीभाई, छिमेकी अस्पतालमा भर्ना भए भने उनलाई भेट्न जाँदा फलफूल, जुस वा स्वस्थ्यवर्द्धक खानेकुरा बोक्छौ ।
जब हामी अस्पताल धाउँछौं छिमेकीले लख काट्छन्, ‘फलानो बिरामी भएछन् ।’ चाहे स्वास्थ्य परीक्षण गर्न होस् वा कुनै परामर्शका लागि, अस्पताल धाउन थालेपछि ‘फलानो रोगी भएछ’ भन्न थालिन्छ ।
कोही जब मर्निङ वाकमा निस्कन थाल्छन् । व्यायाम गर्न थाल्छन् । देख्नेहरु भन्छन्, ‘फलानोलाई पक्कै मधुमेह वा उच्च रक्तचापले छोएछ ।’
यसबाट हाम्रो समाजको मोटामोटी मनोविज्ञान के पाइन्छ भने, बिरामी भएपछि फलफूल खानुपर्छ । यसरी बुझौं, फलफूल भनेको कुरा विरामी वा रोगी भएपछि खाने चिज हुन् ।
फलफूल खानु, व्यायाम गर्नु, दौडनु, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने आवश्यक्ता त्यसबेला मात्र देख्छौं, जब शरीरमा रोगले ‘हाइ अलर्ट’ जारी गर्छ । अर्थात शारीरिक रुपमा स्वस्थ्य हुँदाहुँदै पनि तपाईंले यस किसिमको दिनचर्या अपनाउनु भयो भने, अनुमान गरिन्छ कि तपाईंमा कुनै रोग छ ।
रोग लागेपछि नै फलफूल खानुपर्छ, अस्पताल जानुपर्छ, मर्निङ वक गर्नुपर्छ भन्ने सोंचकै कारण हामी रोगी हुँदैछौं । जबसम्म रोग लाग्दैन, स्वस्थ्य जीवनशैली अपनाउने आवश्यक्ता देख्दैनौं । फलफूल खाने, व्यायाम गर्ने जरुरत ठान्दैनौ ।
यसबाट प्रष्ट के हुन्छ भने, जुन ढंगको जीवनशैली अपनाउनुपर्ने हो, त्यसको ठिक विपरित उभिएका छौं ।
अर्थात फलफूल सेवन गर्दैनौं । व्यायाम गर्दैनौं । मर्निङ वाकमा निस्कदैनौ । नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्दैनौ । मनलाग्दो जीवनशैली अपनाउँछौं । मनलाग्दो खान्छौं । मनलाग्दो सुत्ने-उठ्ने गर्छौं । यहि कारण हामी रोगी हुन्छौं । जब रोगले गाँज्न थाल्छ, तब मात्र आफ्नो जीवनशैली परिवर्तन गर्ने अभ्यास गर्छौं ।
रोगी भएर उपचार गर्नु उपयुक्त कि रोग लाग्नै नदिनु ?
पक्कै पनि तपाईंको मनले दोस्रो विकल्प सर्वोत्तम मान्नेछ । तर, तपाईंको जीवनशैली पहिलो विकल्पमै अल्भिmएको छ । अर्थात जब रोगले च्याप्छ, तबमात्र उपचारको खोजीमा दौडनुहुन्छ ।
सोच्नुहोस् त, तपाईं एक जनालाई रोग लाग्छ । तर, त्यसले तपाईं एक्लोलाई मात्र दुःख दिदैन । सबै घर-परिवारले तनाव झेल्नुपर्छ । घरमा कुनै सदस्य विरामी भए सम्पूर्ण परिवारको मनस्थिती बोझिलो हुन्छ । कसैले पनि उमंगमय ढंगले आफ्नो काम गर्न सक्दैन ।
अर्कोतिर तपाईंको दैनिकी प्रभावित हुन्छ । भनेजस्तो वा सोचेजस्तो काम गर्न पाउनुहुन्न । अस्पताल धाउने, परीक्षण गर्ने, उपचार गर्ने, औषधी सेवन गर्ने चक्करमा तपाईं गल्दै र थाक्दै जानुहुन्छ ।
यता आर्थिक बोझ पनि थपिन्छ । एकातिर तपाईं आयआर्जनको काममा सहभागी हुनुभएको छैन । परिवारका लागि त्यसैपनि बोझ भयो । अर्कोतिर तपाईंको उपचारका लागि लाग्ने खर्चले व्यायभार बढाइदिन्छ ।
रोग लागिसकेपछिको अवस्थामा कसरी तपाईं र समग्र तपाईंको परिवारले पीडा झेल्नुपर्छ भन्ने कुराको उदाहरण मात्र हो यो । तर, यस्ता संभावित खतराबारे हेक्का हुँदा हुँदै पनि हामी खराब जीवनशैली अपनाउँछौं । जुन खान नहुने हो, त्यही खान्छौं । जे नगर्नुपर्ने हो, त्यही गर्छौं । हामी मनलाग्दो ढंगले यावत् कुरा गर्छौं र दोष चाहि रोग वा शरीरलाई दिन्छौं ।
रोग त्यसै लागेको होइन । त्यसमा तपाईंको कमजोरी आवश्य छ । तपाईंले रोग प्रतिरोधात्मक शरीर निर्माणका लागि कुनै प्रयास गर्नुभएको थियो ?
सुपाच्य र सन्तुलित भोजन गर्नुभएको थियो ? नियमित व्यायाम गर्नुभएको थियो ? सकारात्मक सोंचको विकास गर्नुभएको थियो ? सक्रिय जीवनशैली अपनाउनुभएको थियो ?
यी प्रश्नहरुको जवाफ नकारात्मक आउन सक्छ । त्यही कारण रोग लाग्यो । थला परियो । औषधी गर्नुपर्ने भयो । अस्पताल धाउनुपर्ने भयो । औषधी-उपचारमा पैसा सकियो ।
निरोगी अवस्थामा, शारीरिक रुपले तन्दुरुस्त भएको बेला हामीले शरीरलाई रोग प्रतिरोधात्मक बनाउन सक्छौं । यसका लागि केही गर्न पर्दैन । केवल जीवनशैली स्वस्थ्य र सन्तुलित राखे पुग्छ ।
यस्तो खानापान गरौं, जसले पाचन यन्त्रलाई सहज बनाउँछ । सजिलै पच्छ । साथसाथै शरीरलाई पोषण पनि आपूर्ति गर्छ । सन्तुलित र सुपाच्य खानेकुरा सेवन गरौं । खाना खाने समय नियमित गरौं । थोरै थोरै तर धेरै पटक खाने बानी गरौं ।
बिहान चाडै उठ्ने, चाडै सुत्ने गरौं । सुत्ने र उठ्ने तालिका नियमित गरौं । रातमा कम्तीमा सात वा आठ घण्टा मस्त सुतौं ।
सक्रिय दिनचर्या अपनाऔं । बिहान उठेर योग गरौं । मर्निङ वाक गरौं । व्यायाम गरौं । ध्यान गरौं । दिनभर पनि शारीरिक रुपमा केही न केही गरौं । सक्रिय जीवनशैली अपनाऔं ।
मनको शुद्धिकरण गरौं । मनको विकारले तनलाई असर गर्छ । शरीर र मनको सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै हुन्छ । जब तपाईं मानसिक रुपले तनावमा हुनुहुन्छ, त्यसको असर मुटुमा पर्छ । जब तपाईं भयाभित हुनुहुन्छ, डरको अवस्थामा हुनुहुन्छ, तनावको अवस्थामा हुनुहुन्छ, मुटुको गति बढ्छ । स्वासप्रश्वास प्रक्रिया अनियमित हुन्छ । यसले गर्दा शरीरको काम नियमित र चुस्त हुँदैन । रोगले आक्रमण गर्छ ।
त्यसैले शरीरलाई सक्रिय राख्ने, खानपान सन्तुलित र सुपाच्य गर्ने साथसाथै मनलाई शान्त, सकारात्मक पनि राख्ने । यस किसिमको जीवनशैलीले हामीलाई अस्पताल धाउनुपर्ने वाध्यताबाट मुक्त गर्छ ।
नोट : तर कुनै जटिल स्वास्थ्य समस्या आउँदा र औषधि किनेर सेवन गर्नुपर्दा चिकित्सक एवंम स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग सल्लाह गर्न जरुरी छ । आयुर्वेदिक औषधिहरू प्रयोग गर्दा खानपानलाई पनि ध्यान दिनु जरुरी छ ।
Don't Miss it यी बानीहरू, जसले हामीलाई प्रगति गर्नबाट रोक्छ, जान्नुहाेस्
Up Next यस्ता छन् फिटकिरी प्रयोग गर्दा हुने फाइदाहरू
यस्ता छन्, ​धुम्रपानको लतबाट छुट्करा पाउने घरेलु उपाय
​धुम्रपान स्वास्थ्यको लागि हानिकारक मानिन्छ । यो थाहा पाउदा पाउदै पनि मानिसहरु ​धुम्रपान सेवन गर्न छोडदैनन । आयुर्वेदिक र घरेलु उपायबाट धुम्रपानको…
हामीले सधै हाम्रो खानपिनमा गर्ने गल्तिहरु यस्ता छन्
हामीले हाम्रो दैनिक खानपानमा धेरै गल्ति गरिरहेको हुन्छौं । जुन कुराको हामीलाई नै ख्याल हुदैन । यसले गर्दा हामी विभिन्न…
उठ्ने बित्तिकै काममा लाग्नु दिनको शुरुवात विस्तारै विस्तारै एवं शान्तसँग गर्नु पर्दछ । आँखा खुलेपछि थोरै समय आराम गर्नुहोस् ।…
यस्ता छन्, मुख धुँदा गर्नु नहुने कुराहरु
१) फेस वाश वा सावुन अनुहारमा धेरै बेर सम्म नरगड्नुस् । २) अनुहारमा मसाज गर्नु पनि राम्रो मानिन्छ । तर…
यस्ता छन्, तुलसीको पातको फाइदा
-तुलसीले रक्तचाप र कोलेस्ट्रोल स्तरलाई कम गरेर मुटुलाई स्वस्थ राख्छ । दिनदिनै तुलसीको पात चपाउने मानिसलाई मुटुरोग लाग्दैन । -तुलसीले…